Ndị na -akwado anyị - Ọrụ Iwu steeti Prairie
Hapụ ugbu a
Awards & Mmezu
Otu esi enweta enyemaka
Ndi na akwado anyi
ndị na-akwado anyị
Ọrụ Prairie State Legal na -adabere na nkwado nke ndị mmadụ, ntọala, ụlọ ọrụ na ndị obodo iji mezuo ebumnuche anyị nke enyemaka iwu obodo. Anyị na na -enwe ekele nke ukwuu maka ndị a maka onyinye ha.
Ndị ọka iwu 2021 maka ndị nyere onyinye ikpe ziri ezi
Onye mmeri ($ 2,500)
Onye ndu ($ 1,000)
Enyi ($ 500)
Ndepụta Enyemaka Iwu nke Prairie State 2020
Ọrụ Iwu Iwu nke Prairie
Hichapụ ndekọ mpụ gị! Zute onye ọka iwu n'efu na Tọzdee, June 30, site na 12:00 ruo 2:00 ehihie, na Freeport Public Library, 100 E. Douglas St., Freeport, IL. Mụtakwuo: bit.ly/3lyAjqm	... Lee MoreLee obere
Hichapụ ndekọ mpụ gị, June 30 & Julaị 28 - Ọrụ Iwu Ọchịchị Prairie
Hichapụ ndekọ mpụ gị. Zute onye ọka iwu n'efu na Tọzdee, June 30 na Julaị 28, site na 12:00-2:00 ehihie, na Freeport Public Library, 100 E. Douglas St., Freeport, IL.
Lee na Facebook
Share on Facebook Share on Twitter Kekọrịta na Linked In Kwuo site na Email
Nweta ebe obibi gị
Officelọ Ọrụ Nlekọta
303 North Main Street, ụlọ 600
Ndị ọrụ iwu obodo Prairie anaghị akpa ókè na nnyefe ọrụ dabere na agbụrụ, ụcha, obodo, obodo, okpukperechi, mmekọ nwoke na nwanyị, nkwarụ, afọ, nghazi mmekọrịta nwoke na nwanyị, njirimara nwoke ma ọ bụ omume ọ bụla ọzọ nke iwu kpuchitere.
Ụdị Usoro mkpesa
Ụdị mkpesa ịkpa oke